ဂျန်နာရာ - ဝီကီပီးဒီးယား
(1981-03-18) မတ် ၁၈၊ ၁၉၈၁ (အသက် ၄၀)
ဂျန်နာရာ (ဟန်းဂု: 장나라; ၁၈ မတ် ၁၉၈၁ မွေး) သည် တောင်ကိုရီးယားအဆိုတော်နှင့် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားနှင့် တရုတ်အနုပညာလောက၌ ထင်ရှားသည်။ သူ့သီချင်း အိပ်မက်လှလှ ကြောင့် လူသိများသည်။ New Nonstop, Successful Story ofaBright Girl, Bratty Princess, Baby Faced Beauty, School 2013, My Love Patzzi, Fated to Love You နှင့် I Remember You စသော ဇာတ်လမ်းများကြောင့်လည်း လူသိများလေသည်။
၆ အလှူအတန်းနှင့် အခြားလှုပ်ရှားမှုများ
၈.၄ ဇာတ်ဝင်တေးများ (OST)
အရပ် ၁၆၅ စင်တီ
အလေးချိန် ၄၅ ကီလို
လက်ရှိ၌ ဖခင်၊ အစ်ကိုနှင့် အတူနေထိုင်လျက်ရှိ။
ဂျန်သည် ၂၀၀၂ မေ၌ အဆိုတော်အဖြစ်နှင့် ဖျော်ဖြေရေးကမ္ဘာအေဂျင်စီမှ ပွဲဦးထွက်လာသည်။ အက်စ်အမ် ဖျော်ဖြေရေးနှင့် စာချုပ်ချုပ်ပြီး အဆိုတော်ပေါက်စအဖြစ် သူ၏ အနုပညာခရီးကို စခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အက်စ်ဖျော်ဖြေရေးမှ အခြားအနုပညာရှင်များထက် လူကြိုက်နည်းလိမ့်မည်ဟူသော ခန့်မှန်းချက်ဖြင့် သူ့ကို ဖြုတ်ခဲ့သည်။. အက်စ်အမ်စီမံခန့်ခွဲရေးမှ မည်သို့ပင် ထင်မြင်နေပစေ၊ ဂျန်သည် ငါ့မျက်ရည်တွေ သင်္ချိုင်းဖြစ်ဟူသော သီချင်းဖြင့် ပထမဆုံးဇာတ်လမ်း ဟူသော ပွဲဦးထွက် အယ်လ်ဘမ်ကို ဖြန့်ချိလိုက်သည်။ အစကနဦး၌ သိပ်လက်မခံကြရကား ကိုရီးယားတေးဂီတဇယား၌ နံပါတ် ၁၂ သာ ချိတ်လေ၏။ လူသိများသော ပွဲဦးထွက်သူများ sitcom New Nonstop ၌ ပါဝင်ပြီးနောက် ကျော်ကြားလာပြီးလျှင် အခြားသီချင်းများ Confession နှင့် April Story တို့ကဲ့သို့သော အယ်လ်ဘမ်များကို ဆက်တိုက်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် တေးဂီတဇယားအမျိုးမျိုးတို့၌ ဘုတ်ထိပ်စွဲလေတော့သည်။  အယ်လ်ဘမ်သည် ကော်ပီပေါင်း သုံးသိန်း ရောင်းချရ၏။ သို့ဖြစ်၍ ဂျန်သည် အမ်ဘီစီ၏ တေးဂီတရှိုး၌ ပင်တိုင်တက်ဆက်သူအလုပ်ကို ဆက်လက်တည်မြဲစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်လေသည်။ ကေဘီအက်စ် ဆွေးနွေးပွဲ အချစ်ဇာတ်လမ်း၌လည်း ပင်တိုင်တင်ဆက်သူ လုပ်သည်။ ၂၀၀၁ အကုန်၌ နှစ်ကုန် တေးဂီတဆုပေးပွဲ၌ လူသစ်အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်ဆုကိုလည်းကောင်း၊ ဖျော်ဖြေရေးဆုပေးပွဲ၌ လူသစ်တင်ဆက်သူဆုကိုလည်း ရရှိလေသည်။
၂၀၀၂ အောက်တိုဘာ၌ ဒုတိယအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော Jjang Nara Vol.2 Sweet Dream ကို ဖြန့်ချိသည်။ အိပ်မက်လှလှသီချင်းသည် ချက်ချင်းပေါက်သွားပြီး ကိုရီးယားတေးဂီတဇယား၌ နံပါတ်တစ် တန်းချိတ်လေသည်။ (...) ၎င်းအယ်လ်ဘမ်သည်လည်း ထိုနှစ်အတွက် တောင်ကိုရီးယား၌ အရောင်းရဆုံး အယ်လ်ဘမ်များထဲမှ တခု ဖြစ်လာသည်။ ထိုသီချင်းကို သူ၏ ၂၀၀၂ ဇာတ်လမ်းဖြစ်သော My Love Patzzi ၌ ဇာတ်ဝင်တေးအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ သူ၏ အတောမသတ် ကျော်ကြားမှုကြောင့် အမ်ဘီစီ ဂီတပွဲတော်နှင့် ကေဘီအက်စ် ဂီတဆုပေးပွဲ၌ ဒေဆန်ဆုနှစ်ဆု သို့မဟုတ် ဂရင်းဆု(တနှစ်တာကိုရီးယားထိပ်တန်းအနုပညာရှင်နှင့် ညီ)ပါဝင်သော ဆုပေါင်းမြောက်များစွာကို ရရှိခဲ့လေသည်။ ၂၀၀၃ ၌ တရုတ်စီစီတီဗီ-အမ်တီဗီ ဆုပေးပွဲ၌ တနှစ်တာကိုရီးယားအဆိုတော်ဆုကို ရပြန်သည်။
တရုတ်ပြည်၌ သူ့ကို လူကြိုက်များမှုက တရုတ်ဗားရှင်း အယ်လ်ဘမ်များ ထုတ်ဖြစ်ခြင်းဖြင့် တရုတ်၌လည်း နယ်ပယ်တခု ရရှိခဲ့သည်။ သူ့ပထမဆုံးတရုတ်အယ်လ်ဘမ်သည် တရှိန်ထိုးအောင်မြင်ပြီး ယခင်ဖြန့်ချိပြီးသော ကိုရီးယားသီချင်းများကို တရုတ်လိုဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အိပ်မက်လှလှ၊ It's Probably Love(အချစ်ပဲနဲ့တူတယ်)၊ I'm A Woman Too(ကျမလည်းမိန်းမသား) တို့၏တရုတ်ဗားရှင်းသည် အာရှတဝန်း ရေဒီယိုများ၌ အထူးလူကြိုက်များလေသည်။ ကိုရီးယားနှင့် တရုတ်သီချင်း နှစ်မျိုးလုံး ဆိုရလေ့ရှိသော တရုတ်ပြည်အနှံ့ တေးဂီတဝိုင်းများ၌လည်း ဖျော်ဖြေရသည်။ ၂၀၀၆ ၌ ဒုတိယတရုတ်အယ်လ်ဘမ် ကွန်ဖူးကို ဖြန့်သည်။
ဂျန်သည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေး မိုးနှင့်သမုဒ္ဒရာ၊ ရုပ်သံရှိုးများအတွက် ဒုံရီနှင့် ကလေးရုပ်အလှစသည့် သံစဉ်များကိုလည်း ဆိုပေးခဲ့သည်။ ကိုရီးယားအန်နီမဲရုပ်ရှင်များ၌လည်း အသံသရုပ်ဆောင်သည်။
၂၀၀၂ ၌ ဂျန်ပထမဦးဆုံး ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ရသော ဇာတ်လမ်းမှာ အက်စ်ဘီအက်စ်၏ Successful Story ofaBright Girl (명랑소녀 성공기) ဖြစ်ပြီး ဂျန်ဟွပ်နှင့် တွဲရသည်။ ၎င်းဇာတ်လမ်းကို ကောင်းစွာ လက်ခံကြပြီး ပရိသတ်ကြည့်ရှုနှုန်း မြင့်မားသည်။ ၂၀၀၃ ပေဆန် အနုပညာဆုပေးပွဲ၌ ၎င်းဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် မျက်နှာသစ်ရုပ်သံမင်းသမီးဆုကို ရရှိသည်။ ရုပ်သံနှင့် ပေါက်သီချင်း ချိုမြိန်သောအိပ်မက်တို့ကြောင့် ထိုနှစ်တွင် တောင်ကိုရီးယား၏ ကြယ်ပွင့်အဖြစ် ထွန်းတောက်လာခဲ့သည်။ ရုပ်သံနှင့် ပရင့်ကြော်ငြာများအတွက် သူ့ထောက်ခံကြော်ငြာပေးမှုများကို ပြလုပ်ရန်၊ ရုပ်သံရှိုးများနှင့် ရုပ်ရှင်များအတွက် ကမ်းလှမ်းမှုများစွာ လက်ခံရခြင်းတို့ကြောင့် အလုပ်အများဆုံးနှင့် ကိုရီးယားအမျိုးသမီးအနုပညာရှင်များအကြား အရှာဖွေခံရဆုံး သူတဦးဖြစ်လာသည်။
၂၀၀၅ ၌ တရုတ်ပြည်တွင် သူ့ကို လူကြိုက်များသောကြောင့် Bratty Princess (刁蛮公主) ၌ ပထမဆုံး သရုပ်ဆောင်ကြည့်လေရာ၊ တရုတ်စကားပြောပရိသတ်များ ချစ်ခင်မှုကို ရရှိပြီး၊ တရုတ်ပြည်နှင့်တကွ အခြား တရုတ်စကားပြောနိုင်ငံများ၌ ထင်ရှားလေသည်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲအောင်မြင်မှုက ဂျန်ကို တရုတ်၌ hallyu ခေါ် ကိုရီးယားလှိုင်းကြယ်ပွင့်အဖြစ် ရောက်ရှိစေပြီးလျှင် တရုတ်၌ အခြားဇာတ်လမ်းတွဲများစွာ၌လည်း ပါဝင်ရလေသည်။
၂၀၀၉ အောက်တိုဘာ၌ ဂျန်နာရာသည် တောင်ကိုရီးယားရှိ ဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်၌ မိမိ၏ ရုပ်ရှင်သစ်အကြောင်း ပြောကြစဉ် ရန်ပုံငွေကိစ္စကြောင့် တရုတ်ပြည်သို့ သုံးလေးခေါက်သွားပြီး လှုပ်ရှားခဲ့ရသည်ကို နောက်ခံပိတ်ကား၌ စာတန်းထိုးလိုက်သည်မှာ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ပြဿနာရှိတိုင်း တရုတ်ပြည်သွားတာပဲဟု ဖြစ်လေသည်။ နောက်ပိုင်း၌ ထိုမြင်ကွင်းကို တရုတ်အင်တာနက်သုံးစွဲသူတဦးမှ အင်တာနက်ပေါ်သို့ တင်လိုက်လေရာ၊ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ပြဿနာရှိတိုင်း တရုတ်ပြည်သွားတာပဲဟူသော စကားသည် ဂျန်နာရာကိုယ်တိုင် ပြောသည်ဟု ထင်သွားကြပြီးလျှင်၊ ထိုစကား ထပ်ကားသွားသည်မှာ ပိုက်ဆံပြတ်တိုင်းတရုတ်ပြည်သွား၍သရုပ်ဆောင်ရသည်၊ ပိုက်ဆံမရှိသည်နှင့်တရုတ်လာရသည်ဟု ဖြစ်သွားသည်။ ၎င်းသည် သတင်းများ၌ ပါလာရာ၊ တရုတ်ပြည်ပရိသတ်များ၏ မကောင်းမြင်ခံရလေသည်။ ထိုမှတဆင့် တရုတ်အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်း၌ ကျင်လည်နေသော အခြား ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များသို့ပါ ရိုက်ခတ်သွားတော့ရာ၊ ပေကျင်းရှိ ဂျန်၏အေဂျင်စီမှ ကိုယ်စားတောင်းပန်ရသည်မှာ ထိုစကားသည် နောက်ပြောင်ခြင်းသာဖြစ်သည်၊ တရုတ်ပြည်၌ သရုပ်ဆောင်ခြင်းက နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖြေရှင်းလိုက်မှ ပရိသတ်၏ ပိုမိုပြင်းထန်သော ဝေဖန်မှုကို ကြုံရသည်။ 
၎င်းနောက် ဂျန်နာရာသည် ပေါ်ခဲ့အင်တာနက် မီဒီယာမှတဆင့် အလေးအနက် ပြောကြားသည်မှာ
ကျမတို့အလေးအနက်ပြောကြားလိုတာကတော့၊ ဂျန်နာရာဟာ ငွေကြေးပြဿနာကြောင့် တရုတ်ပြည်လာတာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ဂျန်နာရာဟာ ကိုယ့်အနုပညာလောကမှာ လူသိများနေစဉ် တရုတ်ပြည်လာပါတယ်၊ အကြောင်းရင်းကတော့ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုကို စွဲလမ်းတဲ့ ၎င်းရဲ့ ဖခင်ဆန္ဒကို ပြည့်ဝစေလိုတာကတကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ ကိုရီးယားတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်တာကို တဆင့်မြှင့်တင်လိုတာကတကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီကိစ္စကို ခြုံငုံပြီးရှင်းလင်းရမယ်ဆိုပါက အထင်လွဲမှုတခုကြောင့် ဖြစ်မှာပါ၊ အားလုံးပဲ အငြင်းပွားနေကြတဲ့ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ပြဿနာရှိတိုင်း တရုတ်ပြည်သွားတာပဲဆိုတဲ့ ဘာသာပြန်ဟာ ခိုင်မာတဲ့နှလုံးသားအစီအစဉ်မှာပါတဲ့ စာတန်းထိုး ဖြစ်ပြီး၊ ဂျန်နာရာကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့တဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီလိုအထင်လွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အတွက် ဂျန်နာရာရဲ့ပရိသတ်ဖြစ်စေ၊ တရုတ်ပြည်သူများဖြစ်စေ၊ ကျမတို့က အလေးအနက်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်
၂၀၀၇ တရုတ်ပြည်၌ ဂျန်သည် လူကေးမီးယားသွေးကင်ဆာရောဂါသည်ကလေးငယ်များအတွက် ရန်ပုံငွေတီးဝိုင်းကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၅ နှစ်မြောက် တရုတ်နှင့် တောင်ကိုရီးယားသံတမန်ဆက်ဆံရေးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျင်းပသော ပေကျင်းရှိ ဇွန် ၉ ဖျော်ဖြေပွဲ၌ သူနှင့် ဖန်အသင်း တွေ့ဆုံပွဲမှ ရရှိသော ပိုက်ဆံများဖြင့် ဂျန်ဖောင်ဒေးရှင်းကို တည်ထောင်သည်။ ဖျော်ဖြေပွဲ လက်မှတ် ၁၂၀၀ လုံး စောလျင်စွာ ရောင်းကုန်သွားသည်။ ဖျော်ဖြေပွဲအပြီး စင်ပေါ်၌ တရုတ် လှူဒါန်းရေးအဖွဲ့က ဂျန်ကို နှလုံးသားလှသံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပြီး၊ ဂျန်သည် ထိုသို့ဂုဏ်ပြုခံရသည့် ပထမဆုံးသော နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်လာသည်။ 
2001 New Nonstop 뉴논스톱 ဂျန်နာရာ MBC South Korea
2002 Successful Story ofaBright Girl 명랑소녀 성공기 Cha Yang-soon SBS
My Love Patzzi 내 사랑 팥쥐 Yang Song-yee MBC
2003 Hello! Balbari 헬로 발바리 (cameo) KBS2
2004 Love Is All Around 사랑을 할꺼야 Jin Bo-ra MBC
Silver Love 银色年华 China
대결! 반전 드라마 SBS South Korea
My Bratty Princess (ဗရုတ်မင်းသမီး) 刁蠻公主 Situ Jing/Xiao Long Xia CCTV China
Wedding 웨딩 Lee Se-na KBS2 South Korea
2007 Good Morning Shanghai 纯白之恋 You Hao Yun China
2010 Iron Masked Singer 铁面歌女 Hu Die/Hu Yin Yin JLTV
2011 Unruly Qiao 刁蛮俏御医 He Tian Xin SZTV
Baby Faced Beauty 동안미녀 Lee So-young KBS2 South Korea
2012 Race Course (ပြိုင်ကွင်း) 跑馬場 CCTV China
School 2013 학교 2013 Jung In-jae KBS2 South Korea
2013 Red Palaquin (ဝေါယာဉ်နီ) 红轿子 Huzhou TV China
2014 Fated to Love You (မင်းကိုချစ်ဖို့ကံပါလာ) 운명처럼 널 사랑해 Kim Mi-young MBC South Korea
Drama Festival "Old Farewell" 오래된 안녕 Han Chae-hee
Mr. Back 미스터 백 Eun Ha-soo
2015 One-Winged Eagle (တောင်ပံပဲ့လင်းယုန်) 单翼雄鹰 (cameo) CCTV China
Hello Monster 너를 기억해 Cha Ji-an KBS2 South Korea
2016 One More Happy Ending 한번 더 해피엔딩 Han Mi-mo MBC South Korea
2003 Oh! Happy Day 오! 해피데이 Kong Hee-ji South Korea
2007 Girl's Revolution (ဂဲလ်တော်လှန်ရေး) 麻雀要革命 China
2009 Sky and Ocean (ကောင်းကင်နှင့်သမုဒ္ဒရာ) 하늘과 바다 Ha-neul South Korea
2012 Flying With You (အတူပျံသန်း) 一起飞 He Qianqian / Baby China
Whoever (ဘယ်သူ့ပဲချစ်ချစ်) 愛誰誰 Yawen (cameo)
2015 Polaroid 폴라로이드 ဧည့်သရုပ်ဆောင် South Korea
2001 Golden Disk Awards Best New Artist First Story ဆုရရှိ
SBS Music Awards Best New Artist ဆုရရှိ
MBC Music Awards Best New Artist ဆုရရှိ
KBS Music Awards Best New Artist ဆုရရှိ
2002 Mnet Asian Music Awards Best Female Artist Sweet Dream ဆုရရှိ
Special Jury Prize ဆန်ကာတင်
Mobile Popularity Award ဆုရရှိ
KBS Music Awards Grand Prize (Daesang) ဆုရရှိ
MBC Music Awards Most Popular Artist ဆုရရှိ
KMTV Korean Music Awards KMTV Award ဆုရရှိ
SBS Music Awards Most Popular Artist ဆုရရှိ
Golden Disk Awards Main Prize (Bonsang) ဆုရရှိ
Seoul Music Awards Main Prize (Bonsang) ဆုရရှိ
KBS Entertainment Awards Best Newcomer inaVariety Show ဆုရရှိ
SBS Drama Awards Top 10 Stars Successful Story ofaBright Girl ဆုရရှိ
2003 Baeksang Arts Awards Best New Actress (TV) ဆုရရှိ
CCTV-MTV Music Awards Korean Singer of the Year ဆုရရှိ
2004 Commendation from the Secretary of Defense Recipient N/A ဆုရရှိ
Honorary Master's Degree from the Beijing Film Academy Recipient N/A ဆုရရှိ
Mnet Asian Music Awards Best Female Artist Is That True? ဆန်ကာတင်
2005 China Golden Disk Awards Most Popular Singer ဆုရရှိ
Asia-Pacific Music Chart Awards Asia's Best Female Singer ဆုရရှိ
to Korean-Chinese Cultural Exchange || data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center; " class="table-na" | N/A || style="background: #99FF99; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2"|ဆုရရှိ
Top 10 Golden Song ဆုရရှိ
Inter-Parliamentary Union Award for Social Service Recipient N/A ဆုရရှိ
2007 Chunsa Film Art Awards Hallyu Cultural Award N/A ဆုရရှိ
2008 Asia Model Festival Awards Asia Star Award N/A ဆုရရှိ
Today's Young Artist Awards Recipient N/A ဆုရရှိ
2009 CSR Korea Awards Special Award (Individual) N/A ဆုရရှိ
Grand Bell Awards Best Actress Sky and Ocean ဆန်ကာတင်
2010 China Golden Rooster and Hundred Flowers Awards Best Actress inaForeign Film ဆုရရှိ
2011 KBS Drama Awards Top Excellence Award, Actress Baby Faced Beauty ဆန်ကာတင်
Excellence Award, Actress inaMiniseries ဆုရရှိ
2012 KBS Drama Awards Top Excellence Award, Actress School 2013 ဆန်ကာတင်
2014 APAN Star Awards Top Excellence Award, Actress inaMiniseries Fated to Love You ဆန်ကာတင်
MBC Drama Awards Top Excellence Award, Actress inaMiniseries Fated to Love You, Mr. Back ဆုရရှိ
Popularity Award, Actress ဆုရရှိ
Best Couple Award with Jang Hyuk Fated to Love You ဆုရရှိ
2015 Korea Drama Awards Top Excellence Award, Actress Hello Monster ဆန်ကာတင်
↑ 장나라 - Daum 영화 (in Korean)။ Daum။ 21 May 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Chosun Ilbo (English Edition): Daily News from Korea - Jang Na-ra to Finally Graduate from University။ English.chosun.com (2010-02-12)။ 2016-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jang Nara finally graduates after 10 years။ allkpop.com (2010-02-19)။ 2016-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ April 9, 2007 (2007-04-09)။ Artist of the week - Jang Nara။ Soompi။ 2016-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ VisitKorea။ VisitKorea။ 2016-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jang Nara 'Can Only Think of You'-INSIDE Korea JoongAng Daily။ Koreajoongangdaily.joins.com (2012-02-20)။ 2016-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ “우리는 환상의 커플”, 안방극장 ‘재회 커플’들이 이끈다 : 뉴스 : 동아닷컴။ News.donga.com (2014-05-24)။ 2016-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 张娜拉狂言“没钱就去中国演出” 张娜拉遭抵制-搜狐娱乐播报
↑ 张娜拉称“中国揽财”是开玩笑 实质为国家交流_娱乐焦点_大楚网_腾讯网
↑ "Jang Nara Named Ambassador of Chinese Charity"၊ KBS GLOBAL၊ 2007-06-29။ 2007-06-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2007-07-02။
↑ Name။ Jang Nara Donates 8 Bil Won of Clothing to Quake-hit Sichuan | SEOULFULL။ Seoulfull.wordpress.com။ 2016-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jang Nara Donates Money to Help Earthquake Victims in China။ English.triptokorea.com (2008-05-22)။ 13 August 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2016-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jo၊ Sang-won (2010-07-02)၊ "10년만에 대학 졸업한 장나라, 중국에서 교수됐다 [[:တမ်းပလိတ်:Bracket]]"၊ Gyeongwon Ilbo၊ 2010-07-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး More than one of |accessdate= နှင့် |access-date= specified (အကူအညီ); URL–wikilink conflict (အကူအညီ)More than one of |accessdate= and |access-date= specified (help); Wikilink embedded in URL title (help)
↑ Jang Nara to promote Gangnam District။ Koreatimes.co.kr (2011-01-11)။ 2016-08-05 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2016-06-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ :: 한국음반산업협회 ::။ 26 September 2004 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ :: 한국음반산업협회 ::။ 21 December 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ :: 한국음반산업협회 ::။2September 2004 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2004년 총결산 국내음반 판매량집계။ 29 September 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျန်နာရာ&oldid=639188" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။